Dielectric China Manufacturers & Suppliers & Factory
Dielectric - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Dielectric)
Toe-drafitr'asa goavam-be momba ny rano fisotro madio
Toe-drafitr'asa goavam-be momba ny rano fisotro madio Tena tery (47 ℃) ny tsiranoka, mandany ny dipoavatra mandritra ny asa, Amin'ny fampiasana hafanana amin'ny fandroana ny hafanana hafanana, . Fluorocarbon hihena antonony dia tsy manam-paharoa andian-dahatsoratra Perfluorinated rano akora, izay Manana...
Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpamboly Windbagines
Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpamboly Windbagines Fluorocarbon Cooling medium , manana fitaovana elektrôlôjika tsara, ary fiatoana avo lozam-piarakodia, mihoatra ny 55KV. andian-dahatsoratra ity dia tsy manam-paharoa Perfluorinated rano, izay manana dielectric avo tsy tapaka, 1.62g / ml hakitroky , Ny...
Solon-drivotra maivana ho an'ny mpamokatra tavoahangin'ny rivodoza
Solon-drivotra maivana ho an'ny mpamokatra tavoahangin'ny rivodoza Ity vokatra maromaro ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan'ny mpanjifa. Ity vokatra ity dia mora tahiry sy fitaterana . Ny tsy fahampian'ny fahosana simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny...
Fitaovam-pitaterana ranonorana ho an'ny mpamokatra angovo Ny solvents fluorinated dia karazana ranon- dia Non-entana mampidi-doza na tsy baomba, Ny teboka tselatra tsy nirehitra , ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra ny Wind dia manana tombony tsy azo ovaina , Fitsipika raha toa ka rafitra fanamainana :...
7PH Sarin-doko sarobidy ho an'ny tavoahangin'ny rivodoza
7PH Sarin-doko sarobidy ho an'ny tavoahangin'ny rivodoza Ny Cooling Solutions tena lafatra ny tsy fahampian'ny simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehanana hafanana hafanana hafanana. Ny fitaovana fitsangatsanganana dia mitaky bozaka fanamafisana, Ny server dia azo amina toerana ambony...
Solon-tsakafo elektronika ho an'ny mpamorona angovo
Solon-tsolika elektronika ho an'ny mpamorona angovo Anarana simika: Perfluorohexene Ny tsy fahampian'ny fahosana simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny hafanana hafanana hafanana. Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana...
TUWF-47 Chemica tsy mampidi-doza ho an'ny mpamokatra tavoahangin'ny rivodoza
TUWF-47 Chemica tsy mampidi-doza ho an'ny mpamokatra tavoahangin'ny rivodoza Ny fluorocarbon refrigerant koa dia antsoina hoe : Perfluorohexene Fluorocarbon Cooling medium manana dielectric avo. Fanitsiana ny singa entin'ny hafanana ao amin'ny rivotra Ny tsy fahampian'ny fahosana simika, dia azo...
Toeram-piofanana goavam-be amin'ny rano fisotro madio
Toeram-piofanana goavam-be amin'ny rano fisotro madio Ny vahaolana fluoride dia nampiharina tamin'ny fanamainana lalina ho an'ny rafi-panadinana solosaina sy ny fanamafisana hafa ary ny famongorana ny hafanana, toy ny rivotra miteraka rivotra ary ny ao anaty fametrahana mpamorona, ny fantson-drivotra...
Fiarovan'ny fluorocarbon an'ny gilasy
Fiarovan'ny fluorocarbon an'ny gilasy Ny toetra mampiavaka ny dielectric : Ny fluorocarbon dia misy tsiranoka mahomby ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny hafanana hafanana hafanana; * Ny tebitin- tsiran-tsiran- tsolika ara-pahasalamana dia tena tsotra. Misy ny fiverimberenana eo...
Fiarandalamby fandroana fluorocarbon ho an'ny gearbox
Fiarandalamby fandroana fluorocarbon ho an'ny gearbox Maro ny antony mahavariana sy ara-toekarena no miova amin'ny vidin'ny lantom-barotra avo lenta kokoa. Ny hafanana dia singa manan-danja amin'ny fomba fijery mekanika. Raha miakatra ny hafanana ao anaty valizy, dia manomboka ny gidro. Rehefa...
Fiarovana avo lenta amin'ny ranomandry
Fiarovana avo lenta amin'ny ranomandry Amin'ny fampivoarana haingana ny teknôlôjian'ny fiara sy ny fitsipika mifehy ny tontolo iainana, indrindra ny fampivoarana ny orinasa hybrid sy elektrika, Ny fepetra ambony kokoa napetraka amin'ny famokarana fitaovana. Amin'ny firongatry ny fanamafisana ny...
Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara
Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara TUWF-47 dia singa HFC tsy manam-paharoa manana lanjany ODP zero ary ambany ny vidin'ny GWP. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanadiovana, fanosotra sy ny fanamainana amin'ny fitaovana fiterin'ny dipoavatra. Afaka manolo ny HCFC misy azy sy ny...
Mampidi-doza ny ranon-tsavoka amin'ny rivotra
Mampidi-doza ny ranon-tsavoka amin'ny rivotra Fampiasana entona: Ity vokatra maromaro ity dia tsy ampiasaina betsaka amin'ny hafanana mifehy ny hafanana ny rafitra fanodikodinana, indrindra ho an'ny rohy rehetra amin'ny famokarana semiconductor; fa dia nampihetsi-po tokoa tamin'ny fanamainana...
7 PH Dielectric Coating for Gearbox
7 PH Dielectric Coating for Gearbox Anarana simika: Perfluorohexene Mila angom-bary fanampiny ny fitaovana fiasana. Ny fampiasana mpankafy izay napetraka = ho an'ny fihodinana haingam-pandeha dia vahaolana iombonana. Ho an'ity vahaolana ity dia misy fanadihadiana tsara indrindra. Noho ny Ny fahasarotan'ny...
Mangatsiaka Fluorocabon mangarahara ho an'ny mpanamory fiaramanidina
Mangatsiaka Fluorocabon mangarahara ho an'ny mpanamory fiaramanidina Anarana simika: Perfluorohexene Ny vahaolana fluoride ho an'ny mpanara-maso ny solosaina Dielectric eo ambany 2 dia tsy mametraka ny angon-drakitra any amin'ny fonosam-pandraharahana Fifandimbiasan-tsakafo tsara, Volavolan-tavoahangy...
Solon-drivotra maivana momba ny solosaina mpanodina Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon no ranom-boankazo faran'izay haingana indrindra amin'ny teny, karazana fitohitohizan- diele avo avo lenta. Fanamafisana ny famokarana hafanana avy amin'ny mpanamory fiaramanidina Ny tsy fahampian'ny entona...
7 PH Dielectric Coating for Controller inverter
7 PH Dielectric Coating for Controller inverter Anarana simika: Perfluorohexene fluoride Coating for Controller inverter, is presented a method for developing the system of dissipation of the inverter Ny andiam-panangonana dielectric dia ny zavatra tsy mampidi-doza ny enti -manana, izay manana dielectric avo. Ny tsy...
Dielectric Dielectric Paint Dielectric Coating 7 PH Dielectric Coating Dielectric Coating Paint Dielectric Coating Liquid Dielectric Coating for Car 47 Dielectric Coating degrees